သတိထဲမှာငါတို့အာရုံ5ဆက်သွယ် ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိအခိုက်အတန့်၌လုပ်ဆောင်နေသောအရာများနှင့်အတူပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုတွင်သိလိုစိတ်နှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူ့စိတ်၏အံ့သြဖွယ်စွမ်းအားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သငျသညျသတိရ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရိတ်သိမ်းလွန်းအလုပ်များနေလျှင်, ပြည့်တန်ဆာကိုယ်နှိုက်ဘာဝနာ ထိုသို့သတိထားဖို့အခ်ါမဟုတ်သောရည်မှန်းချက်၏ဝန်ဆောင်မှုမှာထားဖြစ်ပါတယ်။
သတိ၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ် သတိခိုင်မာအောင်၏ဖြစ်စဉ်ကိုခံစားပါ။ ၎င်းသည်လမ်း၏အဆုံး၌ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာ။ မတွေ့နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောခြင်းနှင့်တူသည်။ စိတ်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာမှု၊ မိမိကိုယ်ကိုနှင့်အခြားသူများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးစသည်တို့ကဲ့သို့သောသတိရှိခြင်းအလေ့အကျင့်ဖြင့်ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများသည်ဤလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသောအရာများဖြစ်သည်။
ငါ့ကိုစာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ပြောပြပါရစေ ကိုယ်ကျင့်တရားကိုဝှက်ထားသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် သတိ၏အလေ့အကျင့်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အလွန်သင့်လျော်သော:
ဆရာရဲ့တုံ့ပြန်မှုက "10 နှစ်"
စိတ်မရှည်, ကျောင်းသားကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည် ဒါပေမယ့် ၁၀ နှစ်လောက်မစောင့်ချင်ပါဘူး ငါအရမ်းအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်
ကြာခဲ့သည် လိုအပ်ရင်တစ်နေ့ကို ၁၀ နာရီ (သို့) ဒီထက်ပိုလေ့ကျင့်မယ် ဒီစည်းကမ်းကိုနေ့စဉ်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာကြာသင်ရမည်နည်း? "
ဆရာကခဏစဉ်းစားပြီးပြန်လည်ဖြေကြားသည် - "20 နှစ်".
သူတို့သေချာပေါက်အတူတကွသွားပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ၊ အထူးသဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလေ့ကျင့်ရန်၊ အရာရာကိုသူတို့၏အချိန်တွင်ဖွင့်ပြောရန်သင်လိုအပ်သည်။ သငျသညျစိုးရိမ်ပူပန်လျှင်, သင်သာသင်ယူမှုကိုပိတ်ဆို့လိမ့်မယ်။
သို့သော်၊ ဤဆောင်းပါး၌သတိရခြင်းသည်သင်၏နေ့စဉ်ဘဝတွင်စည်းကမ်းနှင့်အညီကျင့်သုံးပါကသင့်ကိုယူဆောင်လာနိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးအချို့ကိုဆန်းစစ်သွားပါမည်။ စတင်ကြပါစို့။
ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်သည်တစ်ခုတည်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏စိတ်သည်တင်းမာလျှင်၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ အလိုအလျောက်နှင့်အပျက်သဘောအတွေးများဖြင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ဖျားနာလာမည်။
သတိ၏ရည်မှန်းချက်ကိုပိုပြီးဖြေလျော့ပေးခြင်းဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ အပန်းဖြေရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ပိုမိုတင်းမာစေသည်။ သတိထက်အများကြီးပိုမိုနက်ရှိုင်းသည်။ သတိသည်ယခုအချိန်တွင်သတိထားဖြစ်လာရန်နှင့်အချို့သောအတွေ့အကြုံကိုလက်ခံရန်ကြိုးစားသည်။ ထို့ကြောင့်သင်တင်းမာနေပါကသတိရခြင်း၏ရည်မှန်းချက်သည်ထိုတင်းမာမှုကိုအပြည့်အဝသတိပြုမိရန်ဖြစ်သည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်အစိတ်အပိုင်းကတင်းမာနေတာလဲ စိတ်ဖိစီးမှုအပေါ်မင်းရဲ့တုံ့ပြန်မှု၊
သတိသည်သိလိုစိတ်ကိုသင်၏အတွေ့အကြုံနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားသည်။ ဤအရာပြီးသည်နှင့်သင်သည်အတွေ့အကြုံအတွက်ကြင်နာမှုကိုခံစားရရန်ကြိုးစားခြင်းကိုနက်ရှိုင်းစွာစတင်အသက်ရှူနိုင်သည်။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးတွင်အပန်းဖြေမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သူတို့နာကျင်မှုကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်ဘာမှမရှာနိုင်သူများလည်းရှိသည်။ သတိသည်ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ သငျ့ကိုကူညီစနေိုငျသညျ။
နာကျင်မှုခံစားရသည့်အခါနာကျင်သည့်နေရာကိုကြွက်သားများတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထားပြီးနာကျင်မှုမှသူတို့ကိုယ်တိုင်အာရုံလွှဲရန်အခြားအရာများကိုစဉ်းစားရန်လူတစ် ဦး ကကြိုးစားလိမ့်မည်။
အခြားလူများကဒေါသထွက်ရန်ရွေးချယ်ကြသည်။ ၎င်းသည်နာကျင်သောဒေသ၌သာမကကိုယ်ခန္ဓာ၏အခြားဒေသများတွင်ပါစိတ်ဖိစီးမှုတိုးပွားစေသည်။ လူတစ် ဦး သည်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အမြဲတမ်းရုန်းကန်နေရပြီးရလဒ်အနေနှင့်သူ၏စွမ်းအင်သိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်။
အခြားသူများ သူတို့နှုတ်ထွက်စာနှင့်အတူနာကျင်မှုတုံ့ပြန်။ နာကျင်မှုကသူတို့ကိုကိုင်ထားပြီးသူတို့ကအကူအညီမဲ့ခံစားရတယ်။
သတိတစ်ခုလုံးကိုကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုရှိပါတယ်။ သတိမှတဆင့်လူတစ် ဦး အာရုံစိုက် နာကျင်မှု၏အာရုံကိုအာရုံစိုက်ပါအဖြစ်ဝေးတတ်နိုင်သမျှ။ ဥပမာအားဖြင့်၊
သင်တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံး၊ ကြင်နာမှု၊ သိချင်စိတ်နှင့်အသိအမှတ်ပြုမှုစသည့်သဘောထားများကိုဆွဲဆောင်ရန်သင်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်
နာကျင်မှု၏towardsရိယာကို ဦး တည်။ ဒါမလွယ်ဘူး၊ သင်လုပ်နိုင်တယ်
အလေ့အကျင့်နှင့်အတူတိုးတက်အောင်။ ထို့နောက်သင်စဉ်းစားနိုင်သည် ခြားနားချက်
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုသူ့ဟာသူနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှု၏အာရုံ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုဆိုသည်မှာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိနာကျင်မှု၏အမှန်တကယ်ခံစားချက်ဖြစ်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုမှာစိတ်ဖိစီးမှု၊ စိုးရိမ်ခြင်းနှင့်စိတ်ပျက်ခြင်းဖြစ်သည်။
သတိမှတဆင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုဘေးဖယ်ခြင်းကိုခံရဖို့စတင်ခဲ့သည် ကျန်ရှိသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုရရန်။ ဘယ်အချိန်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုမှစတင်သည်
သင်၏စိတ်သည်သမုဒ္ဒရာနှင့်တူ၏, အခြားအချိန်များတွင်ရံဖန်ရံခါရိုင်းများနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်သော။ တစ်ခါတစ်ရံသင်၏စိတ်သည်မတွေးဘဲအတွေးတစ်ခုမှတစ်ခုသို့လှည့်လည်သွားလာနေသည်။ အခြားအချိန်များ၌အတွေးများသည်နှေးကွေးလာပြီး၎င်းတို့ကြားတွင်နေရာပိုများလာသည်။
သတိသည်သင်၏အတွေးများ၏အမြန်နှုန်းကိုပြောင်းလဲရန်အကြောင်းမဟုတ်သကဲ့သို့ပထမနေရာတွင်ပေါ်ပေါက်လာသောအတွေးများကိုသတိပြုရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏အတွေးများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်သင်သည်လှိုင်းများပေါ်တွင်မျောနိုင်သည်။ လှိုင်းများဆက်လက်ရှိနေသေးသော်လည်းသင်ကိုယ်တိုင်၏အတွေးများကိုထိန်းချုပ်မယ့်အစားပြပွဲကိုကြည့်ဖို့သင့်မှာပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးရှိသည်။
တစ်နေ့တာအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါင်းများစွာကိုယူပြီး၎င်းတို့ထဲမှအများစုသည်သတိမဲ့နေခဲ့ကြသည်။ သတိဟာမင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအားလုံးကိုမင်းစိတ်ထဲသိစေဖို့ကြိုးစားတယ်။ ၎င်းသည်မကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအကြီးအကျယ်လျှော့ချမည်ဟုသဘာဝကျကျဆိုလိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စိတ်ကိုအငြိုးအတေးထားသည့်စိတ်ထဲတွင်သတိရစေပြီးစီးကရက်ကိုသင်စတင်တန်ဖိုးထားသည်၊ သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်၎င်းသည်ဆိုးကျိုးဖြစ်မည်ဟုသင်ထင်သည်။ ဤစိတ်အေးအေးထားသည့်စိတ်နှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့်တွေးသောအတွေးအခေါ်အောက်တွင်သင်က၎င်းကိုရွှေ့ဆိုင်းရန်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာဆုံးဖြတ်သည်။
လည်း, သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုသိရှိခြင်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ သုတေသနအရအူသိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဒုတိယ ဦး နှောက်နှင့်တူသောအာရုံကြောများများစွာရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာဆုံးဖြတ်ချက်များချသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏အစာအိမ်သည်ပင်ကိုယ်သိစိတ်၏ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Michael Eisner, ၂၀၀၅ ခုနှစ်အထိ Walt Disney ၏စီအီးအိုကသူ၏အကြံအစည်သည်ကောင်းသောအကြံအစည်ကိုကြားသည့်အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကတုံ့ပြန်သည်ဟုဆိုသည်။ တခါတရံသင်ကသင်၏အစာအိမ်၊ တစ်ခါတစ်ရံလည်ချောင်းသို့မဟုတ်အရေပြားပေါ်တွင်ခံစားရသည်။
သင်၏သတိလစ်စိတ်တွင်သင်၏သတိစိတ်ထက်သတင်းအချက်အလက်များစွာပိုရှိသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုသိစိတ်နှင့်ယုတ္တိဆိုင်ရာစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်မသိစိတ်တစ်ပိုင်း ဦး နှောက်၏ကြီးမားသောစွမ်းရည်ကိုဆုံးရှုံးသွားသည်။ သတိသည်သင့်ကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာသတိပြုမိစေပြီးသင်၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှု၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု » သတိ » သတိ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားပါ
Pedro Sarrion ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည် MINDFULNESS ၏စာဖတ်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်မှုကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားပြီးဤအကျိုးရှိသောနည်းစနစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနှင့်အတူမျှဝေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ သို့သော်သင်မေးခွန်း၏အဖြေကိုရှင်းပြနိုင်လျှင်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည် - (ပိုမိုသိရှိလိုပါကအသံ ၁၄ ကိုကိုးကားသောအခါ၊ သို့မဟုတ်ယခင်အသံ၌တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်း) ။ ငါတို့ဖျောပွထားသောအော်ဒီယိုကိုဘယ်မှာရှာရမလဲ။ အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Hello Pedro၊ မင်းသတိရနေတဲ့တရားအားထုတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ ငါသတိရခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အသံသင်တန်းကိုယူရန်စိတ်ထဲရှိသည်။ ဤဆောင်းပါးများသည်ဇာတ်ညွှန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ရေးတဲ့အချိန်မှာအနာဂတ်မှာငါထုတ်လွှင့်မယ့်အသံသင်တန်းကိုစဉ်းစားမိတယ်။ ဒါကအသံပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းပဲ၊ အဲဒီစကားလုံးကငါ့ထဲကိုဝင်လာတယ်။ အခုငါပြင်မယ်
Carlos gandara ဟုသူကပြောသည်
carlos gandara သို့ပြန်သွားရန်
စပိန်သတိ၏အသင်း (သတိ) ဟုသူကပြောသည်